Lixda Saxiix Ee Gabi Ahaanba Bedeli Doona Kubada Cagta Marka La Gaaro Xagaaga | Laacibnet.net
HomeSuuqa Kala IibsigaLixda Saxiix Ee Gabi Ahaanba Bedeli Doona Kubada Cagta Marka La Gaaro Xagaaga
Lixda Saxiix Ee Gabi Ahaanba Bedeli Doona Kubada Cagta Marka La Gaaro Xagaaga
March 13, 2021 Balaleti
Korona Fayras ayaa si weyn u saameeyay lacagtii lagu qarashgareyn lahaa suuqa kala iibsiga sannadkii tagay ee 2020, inkastoo weli dhaqaale xumadii uu cudurkaan ku abuuray kubada cagta ay taagan tahay hadana dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga ee xagaaga 2021 waxaa la filayaa inuu isa soo taro iyadoo saxiixa lix ciyaaryahan ay wax walba bedeli doonaan.
Saxiixyadaan waa kuwa saameyntooda aysan ku ekaan doonin labada kooxood ee uu heshiiska dhexmaray balse ay gaari doonto kooxaha kale ee waa weyn ee Yurub.
Hore uma aysan dhicin suurtogalnimo dhab ah oo uu xiddiga reer Argentina kaga tagi karo Barcelona, laakiin haatan taasi waa ay taagan tahay. Paris Saint-Germain iyo Manchester City ayaa ah labada kooxood ee awoodi kara mushaharkiisa qaaliga ah islamarkaana xiiseynaya saxiixiisa.
Madaxweynaha la doortay ee Barcelona Joan Laporta ayaase dadaal ugu jira inuu ka dhaadhiciyo Messi inuu saxiixo qandaraas cusub, wuxuu xitaa ka shaqeynayaa inuu soo xerogeliyo weeraryahanka Man City Sergio Aguero si Messi uu u sii joogo.
Waqtiga Ronadlo ee Juventus waxaa lagu xusuusan doonaa gooldhalintiisa kaliya. Waxaa Bianconeri loo keenay inuu Champions League u qaado laakiin seddex xilli ciyaareed uu Talyaaniga joogo wuu dhaafsiin waayay wareega sideed dhamaadka iyagoo ku haray gacmaha Ajax, Lyon iyo FC Porto.
Ronaldo haddii uu ka tagayo Juventus wuxuu doonayaa koox ku guuleysan karta Champions League taasoo la micno ah PSG haddii Kylian Mbappe uu baxo islamarkaana Messi uusan ku biirin PSG.
Mbappe ayaa noqon kara xiddiga furaha u ah suuqa kala iibsiga kubada cagta. Wuxuu ku guuleystay wax walba oo lagu guuleysan karo marka laga reebo Champions League, wuxuuna leeyahay tayo dabiici ah. Si kastaba qandaraaskiisa PSG wuxuu dhacayaa bisha Juun 2022, mana soo bandhigin ilaa iyo haatan baahi uu u qabo inuu cusbooneysiiyo.
PSG waxay ka soo bixisay 180 milyan euro, haddii ay iibineyso waxay ku dooneysaa labo jibaarka lacagtaas. Haddii uu Mbappe diido inuu qandaraas cusub saxiixo PSG waxay ku qasban tahay inay iibiso haddii kale si xor ah ayuu ku baxayaa sannadka danbe.
Haddii PSG lagu qasbo inay iibiso, waxaa diyaar u ah saxiixiisa oo isku diyaarineysay muddo dheer Real Madrid.
Madaxweynaha cusub ee Barcelona Joan Laporta ayaa u calaamadeystay Haaland ciyaaryahanka ku najixi doona Camp Nou 10ka sannadood ee soo socda. Awoodiisa gooldhalin waa qeyrul caadi inkastoo lagu jahwareersan yahay lacagta rasmiga ah ee lagu burburin karo qandaraaskiisa Borussia Dortmund.
Madaama qiimihiisa uusan u dhaweyn kan Mbappe sababo badan aawadeed, waxaa jiri doonaa kooxo dhowr ah oo tartan u galaya saxiixa xiddiga reer Norway.
Daafaca waayo araga ah weli qandaraas cusub uma saxiixin Real Madrid inkastoo dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyay isaga iyo madaxweyne Florentino Perez laga soo heshiinayo haatan.
PSG ayaa dooneysa khibradiisa difaacasho si uu u noqdo bedelka Thiago Silva oo CHelsea ka dhacay halka Manchester United ay sidoo kale u baahnaan karto.
Alaba wuxuu durbaba xaqiijiyay inuu ka tagayo Bayern Munich xagaaga, wuxuuna qarka u saaran yahay inuu u wareego Real Madrid.
Si kastaba waa adag tahay in la arko halka uu ka geli karo Los Blancos iyadoo ay joogaan Ramos iyo Varane sidaasi darteed waxaa macquul ah inuu imaanayo kaliya haddii uu midkood labadaas xiddig baxo.